Zvinyorwa zvepamusoro Zvekubudirira Nesimba App Push Chiziviso Engagement | Martech Zone
Dzakakwana nguva apo kuburitsa kwakakura zvemukati kwaive kwakaringana. Edhisheni zvikwata izvozvi zvinofanirwa kufunga nezve kugona kwavo kugovera, uye kusangana kwevateereri kunoita misoro yenyaya.
Anogona sei midhiya app kuwana (uye chengeta) vashandisi vayo vanobatanidzwa? Sei dzako metric enzanisa neayo maindasitiri mavhareji? Pushwoosh akaongorora push ziviso mishandirapamwe yemakumi mapfumbamwe nenhau anoshanda enhau uye akagadzirira kukupa mhinduro.
Ndeapi Akanyanya Kubatikana Midhiya Mapurogiramu?
Kubva pane zvatakacherekedza paPushwoosh, pusha ziviso metric zvinopa zvakawanda mukubudirira kwevezvenhau app mukushandisa kwevashandisi. Yedu ichangopfuura Pushidzira ziviso mabhenji mabhenji yakazivisa:
Avhareji tinya-kuburikidza chiyero (CTR) yevezvenhau maapplication ndeye 4.43% paIOS uye 5.08% paApple
Avhareji chiyero chekupinda-mukati iri 43.89% pane iOS uye 70.91% pane Android
Avhareji kuwanda kwekusunda mameseji kanokwana katatu pazuva.
Isu takataura zvakare kuti, pakanyanya, midhiya maapplication anokwanisa kuwana:
12.5X yepamusoro tinya-kuburikidza mitengo paIOS uye 13.5X maCTR epamusoro pane Android;
1.7X yepamusoro mitero yekupinda-mukati pane iOS uye 1.25X yakakwira yekupinda-mukati mitengo pane Android.
Sezvineiwo, midhiya maapplication ane epamusoro mushandisi wekubatanidza metric ane iwo akafanana push ziviso frequency: ivo vanotumira katatu kusundira zuva nezuva, kungofanana neavhareji.
8 Zvinhu Zvinofurira Mobile App Mushandisi Engagement
Iwo anotungamira midhiya maapplication anowana sei kuita nevadzidzi vavo kuti zvinobudirira? Heano maitiro uye misimboti iyo Pushwoosh kudzidza yakatsigira.
Chinhu 1: Iko Kumhanyisa kwenhau Kununurwa muPush Notifications
Iwe unoda kuve wekutanga kubvarura nhau - izvi zvine musoro, asi unozvivimbisa sei?
Shandisa iyo yekumhanyisa-kumhanya Push ziviso tekinoroji kuburitsa nhau yambiro 100X nekukurumidza kupfuura avhareji
Kubva pane zvatinoona, apo vezvenhau maapplication vachimhanyisa yavo Push ziviso kuendesa, yavo CTRs inogona kusvika 12%. Izvi zvakapetwa kaviri pavhareji yatakazivisa mukudzidza kwedu kwedata.
Tsanangudza iyo yekugadzirisa maitiro yekutumira Push notices
Ita shuwa kuti kusimudzira zvemukati kuburikidza nekukasira kuri kukurumidza uye kuri nyore kune munhu mune yako media app timu. Sarudza iyo yekuzivisa ziviso software iyo inobvumidza kuendesa nhau uye marefu kuverenga mukati meminiti - usingazive macode. Mukati megore, zvinogona kukusevhera mazuva manomwe ekushanda akazara!
Chinhu chechipiri: Iyo Tsika Yekusarudza-muKukurudzira kwePush Notifications
Heino nzira yakapusa: bvunza vateereri vako misoro ipi vangade kuziviswa nezvazvo pane kubvunza kana vachida kugamuchira ani zviziviso zvachose.
Papo ipapo, izvi zvichave nechokwadi chepamusoro-chekupinda-muyero muapp yako. Tevere, izvi zvinobvumidza kune yakawanda granular segmentation uye chaiyo yekunangisa. Iwe haufanire kushamisika kana izvo zvemukati zvaunosimudzira zvine basa - vaverengi vanongowana izvo zvemukati zvavakazvipira kuti vagamuchire! Nekuda kweizvozvo, yako yekubatana uye yekuchengetedza metric inokura.
Pazasi pane miviri mienzaniso mienzaniso yekunyorera Prompt inoratidzwa muCNN Breaking US & World News app (kuruboshwe) uye iyo USA Nhasi app (kurudyi).
Chenjera, asi: apo iwe uchida kukura a zvakanaka-zvikamu base yevashandisi-mukati vashandisi, iwe ungangodaro usade kuwedzera runyorwa rweako Push ziviso vanyoreri nenzira dzese.
Iyo Pushwoosh dhata yekudzidza yakaratidza kuti yakakwira yekupinda-mukati chiyero hachisi vimbiso yekumusoro mushandisi kubatirana neako kutaurirana.
Kutora? Chikamu chakakosha, saka ngatigarei pazviri.
Chinhu 3: Push Notification Mushandisi Chikamu
Kuti vawedzere kubatikana kwevateereri vavo, anotungamira midhiya maapplication anonongedzera zviziviso zvavo maererano nehunhu hwevashandisi (zera, nyika), zvido zvekunyoreswa, zvakapetwa zvemukati zvekushandisa, uye maitiro chaiwo-enguva.
Mune ruzivo rwedu, aya ndiwo marimirwo evamwe vaparidzi nemaCTRs avo ne40% uye kunyangwe 50%.
Chinhu 4: Push Notification Kuita munhu
Segmentation inobatsira iwe ziva zvido zvekuverenga kwako. Kuita munhu, panguva ino, kunobatsira vateereri vako ziva yako midhiya app pakati pevamwe vese.
Tongedza zvigadzirwa zvese zvemapurogiramu ako ezve media kuti usvike pakuonekwa - kubva kumusoro kusvika kuruzha runoratidza kutumira kwako meseji.
Zvimiro zvePush ziviso iyo inogona kuve yakasarudzika
Wedzera kubata kwepamoyo nema emojis (pazvinenge zvakakodzera) uye gadziridza zvinopihwa zvekunyorera nekuzvitanga nezita remushandisi. Nezve izvo zvine simba zvemukati, ako Push notices dzinogona kugamuchira iyo 15-40% yekuwedzera muCTRs.
Mienzaniso yemunhu akasundira ayo midhiya maapplication anogona kutumira
Chinhu chechishanu: Push Notification Nguva
Zvinoenderana nehuwandu hwatakabatanidza kuPushwoosh, maCTR epamusoro anoitika neChipiri, pakati pe6 ne8 pm nguva yevashandisi. Dambudziko nderekuti, hazvigoneke kuti midhiya maapplication aronge zvese zviyeuchidzo zvavo zveiyi chaiyo nguva. Kazhinji, edhisheni haigone kuronga yavo yekuzivisa yekumhanyisa kumberi zvachose - vanofanirwa kuendesa nhau kana zvangoitika.
Izvo chero midhiya app inogona kuita, zvakadaro, ndeyekuona iyo nguva iyo vashandisi vayo vari vanowanzo tenderera kubaya pane zviziviso uye kuyedza kuendesa maonero uye kwenguva refu kuverenga ipapo. Matipi mashoma ekubudirira:
Funga nezvenguva dzevaverengi vako
Gadza maawa akanyarara zvinoenderana
A / B bvunzo yenguva mafomati uye mafomati akaendeswa
Bvunza vateereri vako zvakananga - senge iyo SmartNews app iyo inogamuchira vashandisi vatsva neyekunyorera chikumbiro vachibvunza kana vachida kugamuchira pushes
Aya ndiwo maratidziro anoita vezvenhau kugadzirisa dambudziko nekukurumidza uye zvisina kuziviswa ziviso, kudzikisira kubuda uye kuwedzera kusangana kwevashandisi.
Chinhu 6: Push Notification Frequency
Kunyanya kusundidzira midhiya app inotumira, maCTR ezasi avanowana - uye zvinopesana: unotenda here kuti chirevo ichi ichokwadi?
Iyo Pushwoosh dhata yekudzidza yakaratidza kuti Push ziviso frequency uye CTR hazviteedzane - - asi, pane kuwirirana kusinganzwisisike pakati pemamethriki maviri.
Icho hunyengeri ndechekuti, ava vaparidzi vadiki kutumira iwo mashoma mashoma pazuva - kazhinji, havagone kuwana maCTR akakwirira nekuti havana kuwana kunzwisisa kwakakwana kwezvavanofarira vateereri. Vaparidzi vakuru, pane zvinopesana, vanowanzo tumira kwakatenderedza 30 Notices pazuva - uye zvakadaro, gara wakakodzera uye uchiita.
Sezvineiwo, kuwanda kwezvinhu, asi iwe unofanirwa kuyedza kuti uone yakaringana zuva nezuva nhamba yekusundira ye dzako midhiya app.
Chinhu 7: iOS vs. Android Platform
Wati waona here kuti maCTRs anowanzo kwira sei pane Android pane paIOS? Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemusiyano uripo pakati pemapuratifomu 'UX.
Pa Android, kusundira kunoonekwa zvakanyanya kumushandisi: vanoramba vakasungirirwa kumusoro kwechidzitiro, uye mushandisi anovaona nguva dzese pavanodonhedza dhirowa rekuzivisa.
Pane kusundira kweIOS kunongoonekwa pane iyo lockscreen - kana chishandiso chakazarurwa, kusundira kunovanzwa munzvimbo yekuzivisa. Uye nezvinhu zvitsva zvinodzora zviziviso muIOS 15, zviyeuchidzo zvakawanda zvichave kunze kwekutarisa kwevashandisi.
Cherechedza kuti nhamba yevaverengi iwe yaunogona kuitisa nePush notices paIOS uye Android ichave yakasiyana kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe.
MuUK, huwandu hwevashandisi veIOS hwakapfuura mugove wevashandisi veApple munaGunyana 2020, uye ikozvino vateereri vemapuratifomu efoni vanenge vakaenzana.
MuUS, zvakadaro, Vashandisi veIOS vanodarika varidzi vezvigadzirwa zveApple neyakagadzikana 17%.
Izvi zvinoreva kuti mumamhedzisiro manhamba, midhiya app inogona kuwana vazhinji vashandisi veIOS vanoita muUS kupfuura kuUK. Chengetedza izvi mupfungwa kana uchifananidza yako metric metric munyika dzakasiyana kana bhenji.
Chinhu 8: Kuwana vs Kubata Tweaks
Pushwoosh dhata inoratidza kuti CTRs yepamusoro apo media media ine 10-50K uyezve 100-500K vanyoreri.
Pakutanga, mushandisi wekubata anokwira apo nhepfenyuro yenhau yawana vanyori vayo vekutanga ve50K. Kana midhiya app ikaramba ichitarisa pakuwedzera kwevateereri, maCTR anodonha zvakasununguka.
Nekudaro, kana muparidzi achiisa pamberi pekubata kwevashandisi pamusoro pekuwana kwevashandisi, vanogona kuitazve yavo yepamusoro CTR. Panguva iyo midhiya Anwendung inounganidza 100K vanyori, inowanzo ita runyorwa rweA / B bvunzo uye vakadzidza vateereri vavo zvavanofarira zvakanaka. Muparidzi anogona ikozvino kuisa maitiro ehunhu kuwedzera kukosheswa kwekuzivisa kwakaparadzirwa uye nemitengo yavo yekubatana.
Ndeapi maPush Ekuzivisa Matekiniki Achaita Kuti Vaverengi Vako Vabatanidzwe?
Iwe une runyorwa rwezvinhu izvo zvakasimudzira mushandisi kubatanidzwa ne104 midhiya maapplication 'kusundira ziviso. Ndedzipi nzira dzicharatidza kuti dzinonyanya kushanda kwauri? Ongororo uye bvunzo dzeA / B dzichataura.
Gadzira zano rako pane iyo segmentation uye yemunhu misimboti. Cherekedza kuti ndechipi chemukati chinonyanya kubatsira vaverengi vako. Pakupera kwezuva, mabhesiki enhau anoshanda mukushambadzira kwemapepa enhau zvakare - zvese ndezve kuendesa ruzivo rwakakosha kune vateereri chaivo uye nekuvaramba vakabatikana.
Pushwoosh inoyambuka-chiteshi kushambadzira otomatiki chikuva iyo inobvumidza kutumira dzikisa notices (nharembozha uye bhurawuza), in-app mameseji, maemail, uye multichannel chiitiko-chakakonzera kutaurirana. NaPushwoosh, mabhizimusi anodarika makumi masere pasirese akakurudzira vatengi kuita, kuchengetedza, uye kukosha kwehupenyu.
Tora Pushwoosh Demo
Tags: Androidmu-app mamesejiiosiOS vs AndroidMobile Anwendungnharembozha app kubatanidzwamobile app mamesejinharembozha app pusha noticesPush zivisoPush ziviso ctrPush ziviso zvinhuPush ziviso frequencyPush ziviso yekupinda-mukati mitengoPush ziviso yekugadzirisaPush ziviso kurongaPush ziviso chikamuPush ziviso yekumhanyaPush ziviso manhambaPush ziviso nguvaPushwoosh
Mashandisiro Ekushandisa Fonti Inotyisa muIllustrator uye mamwe maApplication